ရှီးပဒီး - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှီးပဒီး ဝါ ဆောင်းပိုးနွေမြက်ကို အလွန်တရာ မြင့်မားလှသော ရေခဲတောင်များပေါ်ဝယ် တွေ့ရှိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၏ ရေခဲတောင်ပေါ်မှာ ပေါက်ဖွားပြီး ဆေးဘက်ဝင် တန်ဖိုးကြီးလှသည့် အကောင်တစ်ပိုင်း၊ နွယ်ပင်တစ်ပိုင်း အကြောင်းက ဇီဝဗေဒ၊ ရုက္ခဗေဒနှင့် သတ္တဗေဒအရ ဝေဖန်ပိုင်းခြားသော် ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာ တခု ဖြစ်လေသည်။ ပေပေါင်းများစွာ မြင့်မားသည့် ရေခဲတောင်များ ရှိရာ ဒေသဖြစ်သော ဟိမဝန္တာတောင်တန်း ဖြာဆင်းရာ တရုတ်၊ တိဘက်၊ နီပေါ၊ ဘူတန်နှင့် မြန်မာပြည်မြောက်ဖျား ရေခဲတောင်တန်းများမှာ တွေ့ရှိနိုင်၏။ ရောဂါဘယ ပျောက်ကင်းရန် တရုတ် တိုင်းရင်းဆေးဝါး၌ ထည့်သွင်းဖော်စပ်ကြပြီး တရုတ်လို 冬虫夏草 (ဆောင်းပိုးနွေမြက်)ဟု ခေါ်ဝေါ်ကာ၊ ဈေးလည်း အလွန်ကြီးလှ၏။
ရေခဲဖုံးတောင်တန်းကြီးများတွင် ဆေးဘက်ဝင် ရှားပါးသစ်ပင်များနှင့် ရှားပါးတိရစ္ဆာန်များကို တွေ့ရှိရ၏။ ဆောင်းမှာ ပိုးကောင်၊ နွေမှာ သစ်ပင် ဟု ခေါ်သည့် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ဤ ရှီးပဒီးကို အလွန်မြင့်မားတဲ့ ရေခဲတောင်များ၌သာ တွေ့ရှိသည်။
ပိုးနွယ်ရှင် ခေါ် ရှီးပဒီးဖြစ်ပေါ်လာပုံက အကောင်မဖြစ်ခင် သန္ဓေသားလောင်း ဖြစ်သော ပိုးဥကောင်လေးများသည် ဆောင်းရာသီအချိန်မှာ ချမ်းအေးလွန်းသဖြင့် မြေကြီးထဲမှာ ဆေးဘက်ဝင် မဂျစ်ဥ၊ ခန်းတောက်မြစ် တို့ကိုစားသုံးပြီး ဆောင်းခိုနေခဲ့သည်။ ဤသို့ ဆောင်းခိုနေသည့် အချိန်မှာ ပိုးလောင်းကောင်လေးများမှာ မြေကြီးအောက်မှာ ငြိမ်သက်နေသော်လည်း ကပ်ပါးမှိုတစ်မျိုး၏ တွယ်ကပ်ငြိတွယ်ခြင်းခံရပြီး ၎င်း ကပ်ပါးမှိုဟာ ပိုးလောင်းကောင်လေးတွေကို ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီး နွေရာသီရောက်ချိန်မှာ ပိုးလောင်းကောင်လေးများ၏ ဦးခေါင်းပေါ်ကနေ မြက်ပင်နှင့် ဆင်တူသော ဦးချိုသဖွယ် အညှောင့်ကလေး ထွက်လာသည်။ ထို အညှောင့်ကလေးများသည် ၅ စင်တီမီတာကနေ ၁၅ စင်တီမီတာအထိ ရှည်လျားစွာ ထွက်ပေါ်လာတတ်သည်။ ဒေသခံများအဆိုအရ၊ ယင်းအချိန်မှာ ပိုးကောင်ဘဝကနေ နွယ်ပင်အဖြစ် ရှင်သန်ချိန် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ရေခဲချိန်မှာ ပိုးကောင်၊ ရေခဲ အရည်ပျော်ပြီး မြေကြီး မြင်ရချိန်မှာတော့ အပင် ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဟု ဆိုကြသည်။
၎င်းရေခဲများ အရည်ပျော်ချိန်မှာ မြေအောက်က ပိုးလောင်းကောင်လေး၏ ဦးခေါင်းကနေ အပင်ကလေး ထွက်လာသောအခါ ဒေသခံ တောင်ပေါ်သားများက ရှာဖွေ စုဆောင်း ကောက်ယူကြသည်။ တောင်ပေါ်ဒေသမှာ ရှေးယခင်ကတည်းက ဆေးဘက်ဝင်သည်ဟု သိခဲ့ကြ၍လည်း ရှာဖွေ စုဆောင်းသူ များပြားလှသည်။
ကျန်းမာရေး အတွက် အလွန် အကျိုးပြုပြီး ဆေးဘက်ဝင်လှသော ဆောင်းပိုးနွေမြက်သည် ဈေးကောင်းလည်း အလွန် ရသည်။ တစ်ကောင်ကို မြန်မာငွေ တစ်သောင်းခွဲခန့် ပေးရပြီး တစ်ပိဿာကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ဝ,ဝဝဝ လောက် တန်ဖိုး ရှိတတ်သည်။ ပေ တစ်သောင်းကျော်မှာ ရှာဖွေတွေ့ရသော ပိုးကောင်လေးများက ပိုပြီး ဈေးကောင်းရသည်။ ရှီးပဒီးများကို အခြောက်လှန်း၊ အမှုန့်ပြုလုပ်ကာ ရောင်းချကြသည်။ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားစသည့်နိုင်ငံများက ဝယ်ယူကြသည်။ တိဘက်ဒေသတွင် ဆေးပိုးနွယ်ကို အမြောက်အမြား ရှာဖွေရရှိပြီး ငွေကြေးစီးပွား တိုးတက်လာကြသူ အများအပြား ရှိနေသည်။
အရသာ ချိုဆိမ့်ပြီး၊ အာဟာရဓာတ် ပါဝင်မှု များပြားသည်။
ဖျားနာပြီး နာလန်ထစလူနာ ကျန်းမာရေး အမြန်ဆုံး ကောင်းမွန်လာစေခြင်း
သွေးရည်ကြည်အတွက် ပရိုတိန်းများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
သွေးဖိအား များခြင်း၊ နည်းခြင်းကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း
အဆုတ် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကောင်းမွန်စေခြင်း
အရေးအကြောင်းများကို ပျောက်ကင်း သက်သာစေခြင်း
နေ့စဉ်ပုံမှန် အားဆေးအဖြစ် သောက်သုံးကြသူများလည်း ရှိသည်။ အချို့သော အားကစား သမားများလည်း ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်မားပြီး အမောအပန်း ခံနိုင်ရန်အတွက် ပိုးနွယ်ပင်ကို အမြဲတမ်း မှီဝဲ စားသုံးသည်။ အချို့သောသူက စွပ်ပြုတ်ထဲ ထည့်ချက်ခြင်း၊ ရှီးပဒီး သက်သက်ကို စားသုံးခြင်းလည်း ရှိသည်။
စနစ်တကျ လေ့လာ၊ သုတေသနပြုခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပြီး ယနေ့ ခေတ်စားနေသော ကိုရီးယားဂျင်စင်းကဲ့သို့ စီးပွားဖြစ် မွေးမြူစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးသည် ဒေသခံများအတွက် လိုအပ်လျက် ရှိသည်။
↑ Ophiocordyceps sinensis (Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora 2007။ International Mycological Association။
↑ http://www.missgreenlady.com/ Archived 15 February 2015 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှီးပဒီး&oldid=724171" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။